Home Wararka Deni oo xilkii Puntland laga wareejiyay iyo karaash oo noqday M/weyne ku...
Deni oo xilkii Puntland laga wareejiyay iyo karaash oo noqday M/weyne ku meel gaar ah
Qoraal lawada sugaayey ayaa ka soo baxay Axmed Cilmi Cismaan oo ahaa Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, ka hor inta aan Madaxweyne Deni u guurin Muqdisho oo uu doonaayo in Madaxweyne ka noqdo.
Karaash ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqey in uu yahay Madaxweynaha Puntland ee kumeel-gaarah.
Talaabadan ayaa la rumaysan tahay in Puntland ka badbaadisay khalalaase siyaasadeed ee uu abuurkeeda lahaa Saciid Deni ka dib markii uu dowladii Puntland uu u raray magaalada Muqdisho.
BAYAAMIN IYO WARGALIN.
Anigoo garowsan masuuliyadda, xilka iyo waajibaadka baaxadda leh ee Madaxweyne Kuxigeenka.
Previous articleGuddiga Doorashada FEIT oo Digniin culus u diray xubno damacsan tallaabooyin sharci darro ah
Next articleKaraash: Puntland Anigaa madaxweyne ka ah, Deni waa gudan waayey waajibkiisa
Facebook iyo Twitter oo tir tiray Macluumaad uu Madaxweyne Trump...
MADAXWEYNE FARMAAJO “MARXUUM GACAL WAXAA UU XIRFADDIISA WARIYENIMO LA GARAB TAAGNAA...